Muxuu ka yiri Pedro Rodríguez kulanka habeen dambe ee finalka Europa League? – Gool FM
Muxuu ka yiri Pedro Rodríguez kulanka habeen dambe ee finalka Europa League?
Dajiye May 27, 2019
(London) 27 Maajo 2019. Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Pedro Rodríguez ayaa sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay kulanka uu habeen dambe ee Arbacada kaga hor imaan doono kooxda Arsenal finalka UEFA Europa League.
Pedro Rodríguez oo hadlay kahor ciyaarta habeen dambe ka dhici doonto magaalada Baku ee caasimada Azerbaijan wuxuu ka dhawaajiyay.
“Waxaan mar walba xiiseeneysaa ku guuleysiga koobab inta aad awoodo”.
Laacibka reer Spain oo kooxdiisa hore ee Barcelona kula soo guuleystay 3 jeer tartanka Champions League ayaa wuxuu intaas kaddib hadalkiisa sii raaciyay:
“Waxa ugu horeeya ee aad maskaxda ku heyso waa kulamada finalka”.
“Waxaan xusuustaa qaar ka mid ah finalo wanaagsan, sida kulankii finalka ee dhex maray kooxaha Liverpool iyo Milan, ama Barcelona iyo Arsenal, kaasoo ahaa mid aad u xiiso badan, gaar ahaan taageerayaasha kooxda Barca”.
Pedro Rodríguez ayaa wuxuu ugu dambeyn hadalkiisa ku soo xiray:
“Kor u qaadista koob waa wax aad u xiiso badan ee gaar ah, isla markaana uu qofka ku noolaan karo, sababtoo ah way adag tahay in hadal lagu qeexo”.
Cristiano Ronaldo oo laga qaaday kabta dahabka ah ee Talyaaniga, taasoo ka dhigan in afar xilli ciyaareed oo xiriir ah uusan CR7 ku guuleysan gooldhalinta La Liga iyo Serie A
RASMI: Aston Villa oo dib ugu soo laabtay horyaalka Premier League kaddib markii ay garaacday kooxda uu tago Frank Lampard